दरमखोला: माछा मीठो असला, प्रदूषणले कुरमा कसरी बस्ला ? - Narayanionline.com Narayanionline.com दरमखोला: माछा मीठो असला, प्रदूषणले कुरमा कसरी बस्ला ? - Narayanionline.com
बागलुङ, जेठ २७-
राजेन्द्र विक पेशाले सवारी चालक हुनुहुन्छ । जिपमा यात्रु बोकेर गन्तव्यतिर हुइँकिनु उहाँको दैनिकी हो ।
अपर्झट्को बिदा या यात्रु नपाइँदा भने विकलाई पनि फुर्सद मिल्छ । एकै दिनलाई भए पनि नियमित कामबाट उहाँ उम्कन पाउनुहुन्छ । विक अहिले ३३ वर्षको हुनुभयो । फुर्सदमा जहान परिवारलाई समय दिनुहुन्छ । घरधन्दामा सघाउँनुहुन्छ । यसबाहेक उहाँको एउटा पुरानो सौख छ, माछा मार्ने । समय निक्ल्यो कि, खोला धाइहाल्नुहुन्छ उहाँ । उहाँ १०–११ वर्षको उमेरदेखि नै खोला आउजाउ गर्नुहुन्थ्यो । माछा मार्न, पौडी खेल्न र बालुवा झिक्न साथीहरूसहित विक खोलामा पुग्नुहुन्थ्यो ।
कुनै समय गलकोट–९ बाँस्खोला, गल्याङ–७ को बामिया, आँगाखेत–९ को काँडेबासलगायत दरमखोला आसपासका दर्जनौँ परिवार माछामा आश्रित थिए । असला माछा कम पाइन थालेपछि मूल्य पनि अकाशिएको छ । एक किलो आलो असला माछा ९आन्द्राभुँडी फालेको० रु ११ सयसम्म बिक्री हुने गरेको छ । सुकुटी पारेकोलाई प्रतिकिलो रु १० हजारसम्म भन्छन् । होटल, रेष्टराँमा त अझ महँगो पर्छ ।
ओ…मायाले सुनेनौ र बो’लाको, किन टोलाको…!’
मुक्त कमलरीहरूको उच्चशिक्षा अन्योलमा